दक्षिण अमेरिकी महादेशमा आकार मा चौथो र 12 स्वतन्त्र राज्य मिलेर बनेको छ। यो खनिज दक्षिण अमेरिका मा प्रस्तुत छ? फोटो, वर्णन र हाम्रो लेख सूची फेला पार्न।
मुख्य साइट, दक्षिणी र पश्चिमी hemispheres भित्र स्थित छ उत्तरी भाग मा स्थित। पश्चिम गर्न प्रशांत महासागर र उत्तर अमेरिका को पूर्व मा अटलांटिक द्वारा महादेशमा, यो पनामा को संकीर्णपथ द्वारा विभाजित छ।
महाद्वीप को क्षेत्र, लगभग 18 लाख मी को द्वीप साथ। वर्ग। बासिन्दाहरू को कुल संख्या वर्ग किलोमिटर प्रति 22 व्यक्ति को घनत्व संग, 275 लाख मान्छे छ। महाद्वीप को संरचना पनि तिनीहरूलाई केही जस्तै फकल्याण्ड टापु (बेलायत), फ्रान्सेली गायना (फ्रान्स) अन्य महादेशमा, देशहरूमा हौं, नजिकैको द्वीप सामेल छन्।
दक्षिण अमेरिका , उत्तर देखि मौसम र पर्यावरण अवस्था contrasting को गठन प्रभावित जो दक्षिण, एक ठूलो लम्बाइ छ। को मुख्य भूमि subequatorial गर्न समशीतोष्ण देखि, छ climatic क्षेत्र मा स्थित छ। पछिल्लो दुई पटक यहाँ फेला परेन। हुनत मरुभूमिमा केही क्षेत्रमा दक्षिण अमेरिका, सबैभन्दा आर्द्र महादेशमा छ।
खनिज दक्षिण अमेरिका (सूची - पछि लेखमा) धेरै विविध छ, र माटो र जलवायु कृषि लागि अनुकूल छन्। को अमेजन, साथै सबै भन्दा ठूलो अलवण ताल Titicaca - को मुख्य भूमि, धेरै जंगल, नदी र पोखरी, दुनिया मा गहिरो नदी लगायत।
को मुख्य भूमि को संरचना यो बाबजुद, दक्षिण अमेरिका मा खनिज क्षेत्रहरू को एक ठूलो संख्या प्रस्तुत गरेको छ, एकदम सरल छ। पहाडी र सादा, को lowlands र Highlands समावेश जो - मूलतः, इलाका दुई मुख्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
महाद्वीप को पश्चिमी भाग प्रतिनिधित्व longissimus पहाड सिस्टम - Andes। आफ्नो लम्बाइ 9000 मी नाघ्यो र चुचुराहरूको जमीन माथि 6000 मीटर माथि बढ्छ। उच्चतम बिन्दु हो माउन्ट एकुन्कागुआ।
को lowlands पूर्व मा अवस्थित छ। तिनीहरूले महादेशमा को प्रमुख भाग कब्जा। उत्तरी मा एक सानो हाजिर छ गायना Highlands, किनाराको जो धेरै झरने र canyons छन्।
जो महादेशमा को आधा भन्दा बढी कब्जा ब्राजिलियन Highlands, तल स्थित। कारण पठार अवस्थाको सरासर आकार र विविधता तीन plateaus विभाजित छन्। यसको उच्चतम बिन्दु माउन्ट Bandeira (2897 मिटर) हो।
हिमालहरू र plateaus बीच depressions अमेजन, ला Plata, Orinoco lowlands छन्। तिनीहरूले गहिरो नदी घाटिहरुमा भित्र अवस्थित छ। Lowland लगभग monotonous समतल स्थान वर्णन प्रतिनिधित्व।
खनिज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को गठन संग समानान्तर मा, धेरै सदियों गठन गरेका थिए। इलाका, छुटकारा छ रूपमा मामला पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्र विभाजन गरिएको छ।
दक्षिण अमेरिकी प्लेटफर्म को पूर्वी भाग। यसलाई बारम्बार पानी अन्तर्गत बायाँ, जसबाट, गठन तलछट (क्षेत्रमा descended) र क्रिस्टल (ठाउँमा उत्थान) चट्टानहरु। रूपांतरित र igneous चट्टानहरु को सतह outcrops गर्न ब्राजील र गायना Highlands को क्षेत्रमा।
पश्चिमी भाग भाग रूपमा पहाड बेल्ट जोडेको छ आगो को प्रशान्त रिङ। Andes - lithospheric प्लेट को एक टकराव को परिणाम हो। आफ्नो गठन जो ज्वालामुखी गतिविधिमा प्रकट भएको छ, अब भइरहेको छ। यहाँ संसारमा उच्चतम ज्वालामुखी दुई, एक जो (llullaillaco) अभिनय छन्।
खनिज दक्षिण अमेरिका (छोटकरीमा)
महादेशमा धातु अयस्कों, फलाम र मैंगनीज विशेष, जो ब्राजिलियन र गायना अपेक्षाकृत समतल पाना भित्र छन् खनिज स्रोतहरू प्रतिनिधित्व। यहाँ हीरे, सुन र bauxite को जम्मा राखिनेछ।
को Andean orogeny को गठन को परिणाम स्वरूप, यी क्षेत्रमा दक्षिण अमेरिका प्रकृति खनिज विभिन्न गठन। अयस्क र गैर-धातु खनिज पहाड दायरा फरक भागहरु मा अवस्थित छ। पहिलो सीधा Andes र रेडियोधर्मी र गैर-फलाम धातु अयस्कों मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन्, र बाद को तलहटी मा गठन गर्दै हुनुहुन्छ। यस Andes पनि बहुमूल्य पत्थर को जम्मा हुन्छन्।
intermountain hollows र sedimentary चट्टानको गठन depressions मा महाद्वीप को lowlands, मा। त्यहाँ कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्याँस को जम्मा हुन्छन्। यी दहनशील स्रोतहरू, उदाहरणका लागि, lowlands, को Patagonian पठार, साथै मार डेल Fuego को द्वीपसमूह, अटलांटिक महासागर मा स्थित Orinoco छ।
खनिज दक्षिण अमेरिका (तालिका)
दक्षिण अमेरिकी मंच
मैंगनीज, फलाम अयस्क, सुन, हीरे, bauxite, निकल, युरेनियम, एल्यूमीनियम
प्राकृतिक ग्याँस, कोइला, तेल
नयाँ तह को क्षेत्र
सोडियम नाइट्रेट, आयोडिन, फस्फोरस, सल्फर, तामा, एल्यूमीनियम, फलाम, टिन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, युरेनियम, polymetallic, चाँदी अयस्क, सुन, एन्टिमोनी, रत्न
महाद्वीप मा देशहरूको आर्थिक स्तर निकै फरक हुन्छ। सबैभन्दा विकसित ब्राजिल, अर्जेन्टिना र भेनेजुएला छन्। तिनीहरूले भर्खरै industrializing देशहरूमा हौं। विकास को सबै भन्दा कम स्तर अवलोकन फ्रेन्चगिआना, बोलिभिया, इक्वेडर, सुरिनाम, पाराग्वे, गुयाना। अन्य देशहरूमा एक मध्यवर्ती चरण मा छन्।
दक्षिण अमेरिका र आफ्नो उत्पादन को खनिज महाद्वीप मा सबै भन्दा देशहरूको अर्थव्यवस्था मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। भेनेजुएला मा, खानी उद्योग 16 देशको आय को% का लागि खाताहरू। यहाँ, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, इक्वेडर जस्तै, तेल, कोइला र प्राकृतिक ग्याँस उत्पादन। कोलम्बिया रत्नहरू को जम्मा मा, यो पनि भनिन्छ धनी छ "Emerald देश।"
धातु अयस्कों चिली, सुरिनाम, गुयाना र ब्राजिलमा mined। चिली मा तामा अयस्क, भेनेजुएला मा तेल, बोलिभिया मा टिन, साइट मा प्रक्रिया हुनत धेरै स्रोतहरू कच्चा को निर्यात मा आउनुहोस्।
घरेलू खपत लागि कच्चा माल को धेरै सानो रकम रहनेछ। मुख्य भाग बिक्री मा जान्छ। निर्यात तेल, bauxite, टिन, टंगस्टन, एन्टिमोनी, मोलिब्डेनम र दक्षिण अमेरिका मा अन्य खनिज।
महाद्वीप मा मूल खनिज साधनहरूमा अलग हो, दक्षिण अमेरिका यसको विशेष भौगर्भिक संरचना धन्यवाद। को मुख्य भूमि को पश्चिमी क्षेत्रहरुमा igneous र रूपांतरित चट्टानको गठन गुना। फलस्वरूप, त्यहाँ धातु र Nonmetallic स्रोतहरू, सल्फर, आयोडिन र रत्नहरू प्रतिनिधित्व जुन महाद्वीप, मा खनिज संसाधन को सबै भन्दा ठूलो संख्या गठन भएको थियो।
महाद्वीप बाँकी ढाकिएको आंशिक स्फटिक र sedimentary चट्टानहरु संग पठार। तिनीहरूले bauxite, धातु अयस्क, सुन जम्मा हुन्छन्। ठूलो क्षेत्रमा ढाकिएको lowlands र पिडमन्ट निराशा। त्यहाँ मुख्य रूप जीवाश्म ईंन्धन (तेल, ग्याँस, कोइला) को गठन sediments छन्।
कम्प्युटर विज्ञान मा परीक्षा लागि तयारी
कक्षहरूको cytoplasm के छ। को cytoplasm को संरचना को सुविधाहरू
Yamal ज्वालामुखीको मुख: सुविधाहरू, को कारण, रहस्य
बालिका मा Thrush: तुरुन्तै उपचार!
आइरिस सेटर: फोटो र नस्ल को विवरण
दबाइ "Pinosol" समीक्षा
Https देखि http एक रिडाइरेक्ट र किन कसरी बनाउने?
घरमा रक्सी को बनाउँने
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया र जेट नोदन सिद्धान्त
ओजोन तह के हो
Dzhoi Dzhordison: जीवनी र Discography
Particulate फिल्टर - यो के हो? को particulate फिल्टरको पुनर्जनन
"Triduktan": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Triduktan एमवी": मूल्य, स्थान, समीक्षा
आईफोन बाहिर छ कसरी सिङ्क गर्न